Ubomi babantu abahlali bulula, makungabi ngabanye abathandwa kwaye baqatshelwa zizigidi zeenkwenkwezi zethu! Kubonakala sengathi u-Sergey Bezrukov akahlose ukubekezelela imiphumo ethile yodumo lwakhe: iindaba zakutshanje zithi umdlali uphinde uzimisele ukutshutshisa abezindaba ngokuphula ilungelo elibalulekileyo lomntu lokungabikho ukuphazamiseka ebomini bakhe. Khumbula, ukuba izinto ezingagunyaziswanga malunga neBezrukov ngexesha layo sele zimele ziphendule iimpapasho "ZiyiNkanyezi kuphela", "iPaparazzi", kunye neVGTRK.
USergei Bezrukov wabelwa incwadana entsha Inkundla yokuqhawula okanye umkhankaso wokupapasha indima entsha?
USergei Bezrukov wabelwa intsha entsha
Kutheni umculi ophumeleleyo enomsindo ngeendaba? Inyaniso kukuba u-paparazzi onobungqina obetyala uBezrukov unomdla omtsha. Ukuqwalasela imifanekiso emininzi yeentatheli, umdlali watshintsha umfazi oneminyaka engama-50 ubudala u-Irina ngomlawuli omncinane, u-Anna Mathison oneminyaka engama-31 ubudala.
Kungekudala, uSergei udibene no-Anna nje kuphela ubudlelwane obusondeleyo bokusebenzisana, kuba umdlali we-actor udlala ngokucacileyo kwifilimu ethi "Milky Way" phantsi kolawulo lomhlobo omtsha, kodwa kunye nexesha lokuzonwabisa elihle ngaphandle kwendawo. Kwiimifanekiso ezidibeneyo zabalingane kwivenkile ezihamba ngeenxa zonke zesixeko, zibambe izandla, uye endlwini ka-Anna okanye ngobumnene kwisethi.
Irina Bezrukova: iindaba zakutshanje
Ukuqwalasela okunjalo ebomini bakhe, njengokuba iindaba zamva nje zifaka ubungqina, zacaphukisa umdlali weqonga ogqityiweyo lokusongela intatheli ngeendlela eziphucukileyo-inkundla. Kule bali kukho inqaku elincamisayo: akukho nto ibonisa ngayo nayiphi na imibono malunga nemeko yonke okanye ukukhanyela ubudlelwane obungasebenzi kunye nomlawuli wakhe emlonyeni kaSergey Bezrukov.
UBezrukov wahlukana nomkakhe
Ngaba ityala leqhawulo-mtshato okanye umkhankaso wokukhangisa indima entsha?
Kufuneka kuqatshelwe ukuba amahlebezi malunga nokuhlukaniswa kweminyaka engu-40 ubudala uSergei Bezrukov kunye nomfazi wakhe oneminyaka engama-50 ubudala u-Irina usasazeka ngaphezu kweyodwa ngexesha lomtshato wabo oneminyaka eli-15. Ibali eLoud malunga nokuhamba ngokusuka kukaSergei kumdlali wesenzo sikaCatherine Smirnova, eso sibini saye savuma, siqhubeka sihlala kunye. Kwaye nangona kungekho nto ibonisa ngokuthe ngqo ukutshatyalaliswa kwentsapho yaseBezrukov.
U-Irina naye akayi kuhlawula ukubeka izimvo kwizithombe zakutshanje zomyeni wakhe u-Anna Mathison. USergei, ngokungathi akukho nto eyenzekayo, kwi-microblogging yakhe inombulelo umfazi wakhe kwi-award awardable for work charity.
USergey Bezrukov wahlukana nomkakhe
Khumbula, kungekudala nje u-Irina walahlekelwa yindodana yakhe emtshatweni wakhe wokuqala, ngoko ngokuqinisekileyo ufuna ukuxhaswa ngumyeni wakhe ngeli xesha lobomi.Abalandeli abaninzi babala imifanekiso eyayibonayo loo nto phakathi kukaSergei Bezrukov kunye no-Anna Matison, nje ukukhuthazwa kwefilimu entsha apho umdlali usebenza nomlawuli wakhe . Eyona nto inomngcipheko kwi-"Milky Way" enjalo ingozi!
Ukulwa noAnastasia Volochkova waqulunqa isikhalazo kuLawulo loMongameli waseRashiya
I-Cottage cheese buns "I-Mad pump"
Ukuzila ngokunyanga kokulahleka kwesisindo
Impawu zomtshato zasendulo kunye neenkolelo
Ukupheka kwezifundo zesibini kwiimifuno
UVera Glagoleva: ubomi obuqaqambileyo, isifo esibuhlungu kunye nokufa ngokukhawuleza kwe-actress yakho ethandekayo
Indlela yokuqala imidlalo
Ithini elomileyo elincinci lithetha ntoni?
Indlela yokuzisa umntu ngomyalelo phambi koyisa